Tababar Ku Saabsan Hanaanka Qabashada iyo xalinta cabashooyinka. - Cakaara News
Tababar Ku Saabsan Hanaanka Qabashada iyo xalinta cabashooyinka.
Jigjiga(cakaaranews) Jumce 9ka September, 2016. Tababar ku saabsan hanaanka qabashada iyo xalinta cabashooyinka oo uu soo diyaaray xafiiska adeega shacabka iyo horumarinta cududda shaqaalaha DDSI ayaa ka qaybsoomay madasha shirarka qaryaan dhoodaan ee xarunta deegaanka ee jigjiga.
Tababarkan ayaa waxaa loo qaybtay qaarka mid ah hogaaminta degmooyinka deegaanka, maamul magaalooyinka DDS, iyo Gobolada DDSI kuwaasi oo ay ka mid yihiin dhamaan gudoomiyayaasha degmooyinka deegaanka iyo maayirada maamulada magaalooyinka DDSI.
Waxaana furitaankii tababarkan ka hadashay wasiirka adeega shacabka iyo horumarinta cududa shaqaalaha DDSI marwo Maajida Maxamed Maxamuud. Waxayna ka warbixisay ahmiyada uu leeyahay tababarkan, taasi oo sheegay in uu ku salaysan yahay sidii loo adkayn lahaa dhinaca adeeg-bixinta, iyo xoojinta fulinta adeegyada ay ku qancaan bulshada, waxaana la soo saaray ayay tidhi wasiirku barnaamijyo iyo siyaasado ku taxaluqa adeeg-bixinta iyo shuruuc kala gadisan iyo ka jawaab celinta cabashada loo adeegaha iyo adeeg-bixiyahaba iyada oo loo dajiyay barnaamiyo dib-uhabayn ah. Iyadoo ujeedooyinka guud ee siyaasaduna ay tahay adeeg bixinta dawlada oo raaligalisa ama qancisa bulshada. Waxayna wasiiradu ku boorisay masuuliyiinta in ay cashirada tababarkan si qoto dheer u dhuuxaan ka dibna sidii loogu talagalay u meel mariyaan awaamiirta tababarka.
Tababarkan oo ay cashiro ka bixinayaan khabiiro ka socday xafiiska adeega shacabka iyo horumarinta cududa shaqaalaha DDSI. ayaa waxaana ka mid ahaa cashirada ay bixinayeen khabiiradu sidii loo adkayn lahaa xuquuqda sharciyeed ee ah in ay bulshadu hesho adeeg fuhan oo tayaysan, Qaab geedi socodka iyo nidaamka adeeg bixinta, Tayada adeega iyo wakhtiga ay qaadanayso, goobaha adeega lagu bixinayo, anshaxa shaqaalaha iyo qabashada iyo xalinta cabashooyinka.